होसियार ! राति पेन्टी लगाएर सुत्दा हुन सक्छ यस्तो समस्या - Everest Dainik - News from Nepal
होसियार ! राति पेन्टी लगाएर सुत्दा हुन सक्छ यस्तो समस्या
धेरै मानिसहरुको बानी राती सबै कपडा खोलेर सुत्ने हुन्छ । त्यसमा कोही कोही कपडा नै नखुली सुत्छन् भने केही माथिको कपडा मात्र खोलेर टाउजार लगाएर सुत्छन् । तर कोही सबै लुगा खोलेपछि पेन्टीचाहि लगाएरै सुत्छन् । विज्ञहरुको अनुसार पेन्टी लगाएर सुत्ने व्यक्तिले धेरै समस्याको सामना गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
याे पनि पढ्नुस सुताईले पनि व्यक्तित्वको पहिचान झल्काउँछ !
के रातति पेन्टी लगाएर सुत्नु हानिकारक हो ?
विज्ञहरुको भनाई अनुसार पेन्टी लगाएर सुत्नु स्वास्थ्यको लागी खराब बानी हो । यदि राती पेन्टी लगाएर सुतेमा शरिरमा पसिना आएर ब्याक्टेरिया छिर्ने बढी सम्भावना हुन्छ । त्यसपछि उक्त ब्याक्टेरिया बचेर तपाईको शरिरमा छाला चिलाउने र सक्रमण हुने समस्या देखा पर्दछ । त्यसैले राती नांगै सुत्नुपर्छ ।
तर विचार गर्नुस्, पुरुषहरुले भन्दा महिलाहरुले यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । किनभने महिलाहरुलाई महिनावारीको समयमा यो समस्याले सताउँछ । त्यसका लागी राति सुत्ने बेलामा सुतीको कपडा पहिरेर सुत्नु राम्रो हुन्छ ।